Uma umsebenzi ukudweba bushelelezi futhi enhle inkanyezi ezinhlanu enamaphoyinti, ngeke akwenze ngaphandle ekutadisheni inqubo ubuchwepheshe. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ukuze uthole ukusebenza. Udweba kanjani inkanyezi ubuso bombusi, ukusiza ukuqonda izindlela kunazo owaziwa yale nqubo.
Zikhona ongakhetha eziningi ngoba ukubonakala sibalo ezifana inkanyezi.
Kusukela ezikhathini zasendulo, la malungu amahlanu-wakhomba uhlobo lwayo esetshenziswa zokuphetha pentagrams. Lokhu kungenxa impahla yayo, okuyinto ikuvumela ukuba wenze umdwebo ngaphandle oqeda ngepeni ngephepha.
Kukhona futhi enamaphoyinti ayisithupha, ayisishiyagalombili-kwakubonisa inkanyezi, eziyisikhombisa-wakhomba enomsila -tailed.
iziqongo Five ngokwesiko has a starfish. Amafomu lunye bavame ihlangabezane samuntu isithombe Christmas.
Kunoma ikuphi, ukudweba inkanyezi ezinhlanu enamaphoyinti ngezigaba, kubalulekile iphendukele ngosizo lamathuluzi ekhethekile, njengoba isithombe esandleni akunakwenzeka ukubheka ziyalingana futhi emuhle.
Ukuze uqonde indlela ukudweba inkanyezi flat, kufanele baqonde okushiwo kulesi sibalo.
Isisekelo-ke kuwuphawu umugqa eziphukile, imikhawulo lapho izingxenye ngesikhathi yekucala. It kwakha pentagon njalo - pentagon.
izakhiwo ehlukile bobunjwa zingenzeka e inscribing yayo umbuthano, futhi umbuthano ku-polygon.
Zonke izinhlangothi pentagon bayalingana. Ukuqonda indlela yokwenza kahle umdwebo, ungakwazi ukuqonda okushiwo inqubo zokwakha nazo zonke izimo, kanye amaqhinga ahlukahlukene alo izingxenye, sub-yesifunda.
Ukuze ufinyelele kulesi sifiso, indlela ukudweba inkanyezi ubuso bombusi, kumele ube ulwazi amafomula elula zezibalo okuyinto okuyisidingo geometry. Futhi kudingeka ikhono ukubala ku wokubala. Kodwa okubaluleke kakhulu - kuba ukucabanga okunengqondo.
Umsebenzi akuyona kuyinkimbinkimbi, kodwa kudinga ukunemba kanye ukuhlolisisa. Umzamo bayovuzwa elinganiselayo ezinhle, ngakhoke isithombe enhle inkanyezi ezinhlanu olucijile.
Indlela eyaziwa best of indlela ukudweba inkanyezi ikhampasi umbusi futhi protractor ulula.
Ngenxa yalesi inqubo uzodinga amathuluzi ambalwa: ikhampasi noma protractor, a Irula, ipensela, irabha kanye ephepheni elimhlophe.
Ukuze uqonde ukuthi kahle ukudweba inkanyezi kufanele senze njalo, igxathu negxathu.
Ungasebenzisa ukubala ekhethekile.
Qala ngokudweba inkanyezi enhle, umbuthano kufanele ihlukaniswe izingxenye 5 alinganayo. engela ngayine izoba 72 degrees. Hard calc'd ukusebenza ephelele ukugqoka uhla ngesandla.
Ngakho-ke kudingekile ukuba kwakhiwe pentagon njalo. Ngenxa yale njongo, isimiso "izinombolo igolide" unxantathu wesokudla lemilenze 1 no-2, kanye hypotenuse kuyimpande skwele 5.
Isinqumo kungenziwa bacasulwa ukusebenza ngekhompyutha engaba umbuthano isizinda noma ubude emaceleni pentagon. Inguqulo yakamuva ye-iphuzu phezulu inkanyezi izokwenziwa izikhathi ngezikhathi ezifanayo pentagon vertices.
into ukuwahlanganisa kufinyelelwa bahlawuliselwe (samanje Imiphumela ezithile ukuqoqa) ngenxa indlela yokusetshenziswa izinombolo engenangqondo. Ngakho-ke ukudweba geometrically lesifanele, inkanyezi ziyalingana namanje kulula.
Esigabeni sokuqala ukwakhiwa
Ukucabanga ukuthi ukudweba inkanyezi ubuso bombusi, kufanele, okokuqala kunakho konke, ukudweba indilinga. It is uvunyelwe ukwenza nge ikhampasi protractor noma inkomishi evamile. Ifaka ku-abarimi engenhla ephepheni, kubalulekile ukuba usike emhlabeni emaphethelweni ipensela.
Lesi sifunda kumele kwenziwe delicately kakhulu, njengoba asho kamuva uyothola ukuthi irabha.
Ukudweba inkanyezi izigaba, kufanele ihlukaniswe emjikelezweni yizabelo 5 alinganayo. Lokhu kungenziwa nemithetho eyinhloko geometry.
Circle ubukhulu kukalwa nge umbusi. Inani okuholela iyanda yi 6,28. Umphumela wokugcina futhi ibanga izosetshenziswa selisho vertices of the star.
Zonke amaphuzu ngokulinganayo phezu selilonke, usebenzisa inani ebalisisiwe.
Ukuze uqonde indlela ukudweba inkanyezi ngezigaba, kufanele enze wonke izenzo ukubala ngokunembile ukubaluleka ngaphandle ukuqoqa kwabo. Kungenjalo, umsebenzi ngeke ngokwanele lesifanele, emagugu elimnandi.
Vertices elibhalwe ukuthi ngaphambili axhumene.
Ukwenza sibalo ivolumu
izibalo Ukuhlinzeka ngakuthathu Udinga ukudweba lama-facets main. Kuze kube yimanje, wonke amaphuzu emakhoneni ebukhali lapho bexhuma ne okuphambene engeli obtuse.
Kulesi sigaba okukhiwa elungile inkanyezi wabuka izingcezu esiphelele.
Uma kwenziwe ngendlela efanele, isithombe kuyoba abushelelezi. Lokhu kungenziwa ihlolwe zibukeke ligijima liphepha ahlola ukuma. Kuyoba njalo nganoma yini abayenzayo.
wabuka Basic eyenga usebenzisa ngumbusi ipensela elula ngokucace kakhudlwana. Zonke imigqa asizayo ziyasuswa.
Ukuze uqonde indlela ukudweba inkanyezi ngezigaba, kumele kwenziwe zonke izenzo ngokucophelela. Uma kwenzeka yephutha ezingelapheka umdwebo irabha noma ukuchitha zonke manipulations futhi.
Ukuma eqeda kungenziwa ehlotshiswe ngezindlela ezihlukahlukene. Into esemqoka - akudingeki ukuba besabe ukwehluka uzizamele. Fantasia itshela isithombe sokuqala futhi emuhle.
Ungakwazi ukuhlobisa zaveza inkanyezi bushelelezi ipensela noma usebenzise ezihlukahlukene imibala kanye shades.
Ukuze uqonde ukuthi ukudweba kahle inkanyezi, kufanele ukuba ubambelele emigqeni enhle kulo. Ngakho, inguqulo ethandwayo kakhulu umklamo ukwehlukana figure ngasinye ugongolo zibe izingxenye ezimbili alinganayo emgqeni ivela phezulu kuya maphakathi.
Ngaphezu kwalokho, olunye uhlangothi Amabha mnyama umthunzi, kanti eyesibili - a elula. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ipeni lomsizi kuphela elula. Dweba ngeke kuleli cala ngakolunye uhlangothi lwale ugongolo ngayinye.
Angeke wakwazi ukuhlukanisa imigqa ohlangothini izinkanyezi. Ivunyelwe nje ukupenda phezu ugongolo ngayinye lilolonge umthunzi mnyama ngakolunye uhlangothi.
Lolu khetho beyoba impendulo yombuzo kanjani ukudweba inkanyezi ilungile, ngoba bonke imigqa kwakhona izinhlangothi zazo ziyalingana.
Ngokukhethekile, ungakwazi ukwengeza zonke izinhlobo umhlobiso, noma ezinye izici ekuklanyweni yobuhle sibalo. Ukungeza imibuthano eziphakeme, ungathola sikaZwelonke inkanyezi. Ukusebenzisa bushelelezi Ukufiphaza isithunzi uhlangothi, ungathola starfish.
Le nqubo yisona esikhulunywa abantu abaningi, njengoba kwamandla ikuvumela ukuba baqonde indlela ukudweba inkanyezi ezinhlanu enamaphoyinti ngezigaba. Ngaphandle asesebenzisa izibalo eziyinkimbinkimbi zezibalo, kungenzeka ukuthola lesifanele, isithombe esihle.
Njengoba zonke izindlela zabantwana indlela ukudweba inkanyezi ubuso bombusi, ungakhetha lefanele. Ethandwa kakhulu iyona weJiyomethri stepwise indlela. Akuve elula nephumelelayo. Ukusebenzisa fantasy umcabango ingatholakala ifomu elifanele enhle ukudala i kokuqala. Iphethini ongakhetha design kukhona ezihlukahlukene. Kodwa ungahlala beveza ngelakho, indaba engavamile kakhulu futhi emnandi. Into esemqoka - ungesabi ukuba ulinge!
Udweba kanjani ijazi umndeni izikhali
Sleepwalking. nezimbangela zayo